Eto Madagasikara: mihabetsaka ireo olona diabetika | NewsMada
Eto Madagasikara: mihabetsaka ireo olona diabetika
Nanamarika ny andro iraisam-pirenena iadiana amin’ny diabeta, omaly, ny Andia-Malagasy miady amin’ny diabeta (Amadia) tetsy Faravohitra. Ny diabeta sy ny fianakaviana no lohahevitra nentina tamin’izany.
Nisy ny ny fitiliana maimaimpoana natao ho an’ireo olona tonga teny an-toerana nahafantarana, na diabetika na tsia ilay olona. Nisy ihany koa ny fandraisana an-tanana avy hatrany ireo olona notiliana ara-pahasalamana hananan’izy ireo fomba fiaina sy fahazarana tsara hananan’ny vatana tomady.
Amin’izao fotoana, betsaka ireo olona lasa diabetika eto Madagasikara. Tsy mifidy taona intsony fa misy na ankizy na olon-dehibe, indrindra ireo efa mahazo taona. Anisan’ny antony mahatonga izany ny tsy fampiasam-batana sy ny tsy fandanjalanjana ny sakafo hanina. Mila taitra ny ankohonana iray raha toa ka misy olona iray fantatra fa diabetika ao aminy.
Mila manamboatra fomba fiaina mihitsy ary amboarina sy lanjalanjaina ny karazan-tsakafo mba tsy hahadiabetika ny ankohonana iray manontolo. Tokony hanao fitiliana ara-potoana, araka izany, ny tsirairay mba tsy hampiitatra ny fahasimban’ny taova ao anaty.
Miteraka fikorontan’ny vatana sy ny taova rehetra ny diabeta ka izay no tokony hahamailo sy hanaovana fitiliana matetika ary hanarahana ny fahaiza-miaina tsara.